Warning: Illegal string offset 'html' in /home/wordmodules/cache/skin_cache/cacheid_1/skin_topic.php on line 975 Bibles - Myanmar Catholic Bible - theWord Modules
Bibles - Myanmar Catholic Bible
Started by Rev. Tin Aung Takluem, Feb 27 2016 06:15 AM
#1 Rev. Tin Aung Takluem
Posted 27 February 2016 - 06:15 AM
File Name: Myanmar Catholic Bible
File Submitter: Salai Tin Aung
File Submitted: 27 Feb 2016
File Updated: 15 Mar 2016
Author: Myanmar Catholic
Suggest New Tag:: MCB, Myanmar Bible, Myanmar Catholic Bible, Catholic Bible
Myanmar Catholic Bible
John 1:1 အစဦး၌နွုတ်တော်ထြက်စကားတည်ရွိတော်မူ၏။ နွုတ်တော်ထြက်စကားသည် ဘုရားသခင်နွင့်အတူရွိတော်မူ၏။ နွုတ်တော်ထြက်စကားသည်လည်း ဘုရားသခင်ျဖစ်တော်မူ၏။
John 1:2 ကိုယ်တော်သည် အစဦးကပင် ဘုရားသခင်နွင့်ရွိတော်မူ၏။
John 1:3 ကိုယ်တော်အာျးဖင့် အရာခပ်သိမ်းတို့သည်ျဖစ်ပေါ်လာချဲ့က၏။ ကိုယ်တော်နွင့်ကင်း၍ျဖစ်လာသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမ်ွမရွိခဲ့ခ်ေ။
John 1:4 ကိုယ်တော်၌ အသက်တည်ရွိ၍ အသက်သည် လူတို့၏အလင်ျးဖစ်၏။
John 1:5 အလင်းသည်မွောင်မိုက်တြင်ထြန်းလင်း၏။ မွောင်မိုက်မူကား အလင်းကိုမလြွမ်းမိုးနိုင်ခ်ေ။
John 1:6 ယောဟန်အမည်ရွိသောလူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏စေလြွတ်ျခင်းကိုခံရ၏။
John 1:7 သူ့အာျးဖင့် လူသားအားလုံးယျုံကည်လျာကေစရန် သူသည် အလင်းတော်အျကောင်းကို သက်သေချံခင်းငွာလာခဲ့၏။
John 1:8 သူသည် အလင်းတော်မဟုတ်၊ အလင်းတော်အျကောင်းကို သက်သေခံရန်လာသောသူသျာဖစ်၏။
John 1:9 လူအေပါင်းတို့အား ဉာဏ်အလင်းပေးသည့် စစ်မွန်သောအလင်းတော်သည်ကား ကမ်ဘာလောကအတြင်းသိျု့ကြလာမည်ျဖစ်၏။
John 1:10 ကိုယ်တော်သည် ကမ်ဘာလောကတြင်ရွိတော်မျူပီျးဖစ်၍ ကမ်ဘာလောကသည် ကိုယ်တော်အာျးဖင့်ျဖစ်ပေါ်လာ၏။ သို့သော်လည်း ကမ်ဘာလောကသည် ကိုယ်တော့်ကိုမသိခ်ေ။
John 1:11 ကိုယ်တော်သည် မိမိ၏နေရင်ျးပည်သိျု့ကြလာတော်မူသော်လည်း မိမိလူမ်ိုးတို့သည် ကိုယ်တော့်ကိုလက်မချံက။
John 1:12 သို့ရာတြင် ကိုယ်တော်သည် မိမိကိုလက်ချံက၍ မိမိ၏နာမေတာ်၌ယျုံကည်ျကေသာသူတို့အား ဘုရားသခင်၏သားသမီျးဖစ်ရေသာအခြင့်ကိုပေးတော်မူ၏။
John 1:13 ထိုသူတို့သည်ကား လူတို့၏သြေးမွမဟုတ်၊ အသြေးအသားအလိုဆန်ဒအာျးဖင့်လည်းမဟုတ်၊ လူ၏အလိုအာျးဖင့်လည်းမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်မွမြေးဖြားလျာကျခင်ျးဖစ်၏။
John 1:14 နွုတ်တော်ထြက်စကားသည်လည်း လူ့ဇာတိအျဖစ်ကို ယူတော်မူ၍ ငါတို့အလယ်တြင် စံပယ်တော်မူလေ၏။ ငါတို့သည် က်ေးဇူးတော်နွင့် သမ်မာတရားတိျု့ဖင့်ျပည့်စုံလ်က်ရွိသောကိုယ်တော်၏ ဘုန်းတော်ကို ခမည်းတော်၏ တစ်ပါးတည်းသောသားတော်၏ ဘုန်းတော်အျဖစ်ဖူျးမင်ျကရေလျပီ။
John 1:15 ယောဟန်သည် ကိုယ်တော့်ကို သက်သေခံလ်က်ျကြေျးကော်သည်မွာ ငါ့နောက်မျွကြလာမည့်သူသည် ငါမရွိမီက ရွိနွင့်သည်ျဖစ်၍ ငါ့ထက်ျကီျးမတ်သည်ဟု ငါဆိုခဲ့သော သူသည်ကား ဤသူပင်ျဖစ်သတည်း။
John 1:16 ငါတို့အားလုံးသည် ကိုယ်တော်၏ျပည့်ဈုံခင်းမွ က်ေးဇူးတော်တစ်ပါးအေပ်ါတစ်ပါးထပ်ဆင့်ချံကရေလျပီ။
John 1:17 အဘယ်ျကောင့်ဆိုသော် ပညတ်တရားက်မ်းကို မိုးဇက်မွတစ်ဆင့်ပေးချဲ့ခင်ျးဖစ်၏။ က်ေးဇူးတော်နွင့် သမ်မာတရားသည်ကား ယေဇူးခရစ်တော်အာျးဖင့်လာသတည်း။
John 1:18 မည်သူမ်ွဘုရားသခင်ကို မျမင်ဖူျးက။ သို့သော် ခမည်းတော်၏ရင်ခြင်တော်၌ ရွိတော်မူသော တစ်ပါးတည်းသောသားတော်သည် ဘုရားသခင်ကို ထင်ရွားစေတ်ာမူ၏။
John 1:19 ဂ်ူးလူမ်ိုးတို့က သင်သည် မည်သျူဖစ်သနည်းဟု ယောဟန်ကို မေျးမန်းဈေခင်းငွာ ဂ်ရေုဆလင်ျမို့မွ ရဟန်းမ်ားနွင့် လေဝိမ်ိုးနြယ်မ်ားကိုစေလြွတ်ျကေသာအခါတြင် ယောဟန်သည် ဤသို့သက်သေခံလေ၏။
John 1:20 ယောဟန်သည် ထိမ်ဝွက်ျခင်းမရွိဘဲငါသည် ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုအတိအလင်းဝန်ခံလေ၏။
John 1:21 ထိုသူတို့ကလည်း ဤသို့ဆိုလ်ွင် သင်သည် ဧလိယျဖစ်သေလာဟု မေျးကေသာ် သူက ငါမဟုတ်ဟျုပန်ျဖေလ၏။ သင်သည် ပေရာဖက်ျဖစ်သေလာဟု မေျးကျပန်လ်ွင် သူက ငါမဟုတ်ဟျုပန်ျပောလေ၏။
John 1:22 ထိုအခါ သူတို့က သင်သည် မည်သျူဖစ်သနည်း။ ငါတို့ကိုစေလြွတ်သောသူတို့အား ငါတိျု့ပျောပနိုင်ရန် သင်မည်သျူဖစ်ျကောင်း သင်ကိုယ်တိုင်ျပျောပပါလော့ဟု ဆျိုက၏။
John 1:23 ထိုအခါ သူက ငါသည် ပေရာဖက်အီဇာယေဟာထားခဲ့သည့်အတိုင်း သခင်ဘုရား၏ လမ်းတော်ကျိုဖောင့်တန်းဈေကေလာ့ဟူ၍ တောကန်တာရ၌ျကြေျးကော်သောသူ၏အသျံဖစ်သတည်းဟု ဆိုလေ၏။
John 1:24 ထိုသို့ မေျးမန်းရန်စေလြွတ်ျခင်းခံရေသာသူတို့တြင် ဖာရီဇေးဦးမ်ားလည်းပါဝင်ျက၏။
John 1:25 ထိုသူတို့က သင်သည် ခရစ်တော်လည်းမဟုတ်၊ ဧလိယလည်းမဟုတ်၊ ပေရာဖက်လည်းမဟုတ်ပါလ်ွင် အဘယ်ျကောင့်ဆေျးကျောခင်းကိုပေးသနည်းဟု မေျးက၏။
John 1:26 ယောဟန်က သူတို့အာျးပန်ျဖေသည်မွာ ငါသည် ရျေဖင့်ဆေျးကော၏။ သင်တို့အလယ်၌မူကား သင်တို့မသိသောသူတစ်ဦးရွိ၏။
John 1:27 ထိုသူသည် ငါ့နောက်မျွကြလာသောသျူဖစ်သော်လည်း ငါသည် သူ၏ျခေနင်းတော်ျကိုးကိုမ်ျွဖေပျးခင်းငွာ မထိုက်တန်ပါဟု ဆို၏။
John 1:28 ဤအျကောင်းအရာမ်ားသည် ယောဟန်ဆေျးကျောခင်းပေးနေသာ ဂ်ော်ဒန်ျမစ်တစ်ဖက်ကမ်းရွိ ဘက်သနီရြာတြင်ျဖစ်ပ်က်ချဲ့ခင်ျးဖစ်၏။
John 1:29 နောက်တစ်နေ့တြင် မိမိထံသို့ ယေဇူျးကြလာတော်မူသည်ကျိုမင်လ်ွင် ယောဟန်ကျကြေျးကော်သည်ကား ဘုရားသခင်၏သိုးငယ်တော်ကျိုကည့်ျကေလာ့။ လောကသားတို့၏အျပစ်ကို ခ်တ်ြတော်မူသောအရွင်ကျိုကည့်ျကေလာ့။
John 1:30 ငါမရွိမီက ရွိနွင့်တော်မူသည်ျဖစ်၍ငါ့ထက်ပို၍ျကီျးမတ်သောသူသည် ငါ့နောက်၌ျကြလာမည်ဟု ငါဆိုခဲ့သောသူသည် ဤသူပင်ျဖစ်သတည်း။
John 1:31 ငါသည် ကိုယ်တော့်ကိုမသိခဲ့။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော့်ကိုအစ်စရာအဲလ်လူမ်ိုးတို့အား ထင်ရွားစြာဖော်ျပျခင်းငွာ ငါသည်လာ၍ ရျေဖင့်ဆေျးကျောခင်ျးဖစ်သည်ဟု ဆိုလေ၏။
John 1:32 ထို့နောက် ယောဟန်က သက်သေခံသည်ကား ဝိညာဉ်တော်သည် ခ်ိုးငွက် သဏ်ဌာန်ျဖင့် ကောင်းကင်မွဆင်းသက်၍ သူ့အေပါ်၌ နားနေသည်ကိုငျါမင်ရ၏။
John 1:33 ငါသည် သူ့ကိုသိသည်မဟုတ်။ သို့ရာတြင် ရျေဖင့်ဆေျးကောရန် ငါ့ကိုစေလြွတ်တော်မူသောအရွင်က အျကင်သူ၏ အေပါ်၌ဝိညာဉ်တော်သည် ဆင်းသက်၍ နားနေတ်ာမူသည်ကို သင်ျမင်ရပါက ဤသူသည် သန့်ရွင်းသောဝိညာဉ်တော်ျဖင့် ဆေျးကောသောသျူဖစ်သတည်းဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူခဲ့၏။
John 1:34 ငါသည်လည်ျးမင်ခဲ့ရေသျာကောင့် ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ျဖစ်တော်မျူကောင်းကို ငါသက်သေခံသည်ဟု ဆိုလေ၏။
John 1:35 တစ်ဖန်ယောဟန်သည် နောက်တစ်နေ့၌ မိမိ၏ တပည့်နွစ်ယောက်တို့နွင့်အတူရပ်နေစဉ်၊
John 1:36 ယေဇူျးကြလာတော်မူသည်ကျိုကည့်၍ ဘုရားသခင်၏သိုးငယ်တော်ကျိုကည့်ျကေလာ့ဟု ဆို၏။
John 1:37 တပည့်နွစ်ယောက်တို့သည်လည်း ယောဟန်၏စကားကျိုကားလ်ွင် ယေဇူး၏နောက်တော်သို့လိုက်သြာျးကေလ၏။
John 1:38 ယေဇူးသည် လွည့်ျကည့်၍ ထိုသူတို့သည် မိမိနောက်သို့လိုက်လျာကသည်ကျိုမင်သျဖင့် သင်တို့သည် မည်သည့်အရာကိုအလိုရျွိကသနည်းဟု သူတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ သူတို့က ရာဘီ၊ (အဓိပ်ပါယ်ကား ဆရာသခင်ဟု ဆိုလိုသည်) ကိုယ်တော်သည် မည်သည့်အရပ်၌နေတ်ာမူသနည်းဟု မေးလ်ွောက်ျက၏။
John 1:39 ကိုယ်တော်ကလည်း လာ၍ျကည့်ျကေလာ့ဟု သူတို့အား မိန့်တော်မူ၏။ သူတို့သည် လျာက၍ ကိုယ်တော်နေသာနေရာကျိုကည့်ျကျပီးလ်ွင် ထိုနေ့၌ ကိုယ်တော်နွင့်အတူနျေက၏။ အဘယ်ျကောင့်ဆိုသော် ထိုအခ်ိန်သည် ညေနေလးနာရီခန့်ျဖစ်သျောကောင့်တည်း။
John 1:40 ယောဟန်၏စကားကျိုကားရ၍ နောက်တော်သို့ လိုက်ျကေသာသူနွစ်ဦးတို့တြင် တစ်ဦးမွာ စီမြန်ပေတရု၏ညီအန်ျဒေးယျဖစ်၏။
John 1:41 သူသည် မိမိ၏အစ်ကိုစီမြန်ကို ရွေးဦးစြာ တြေ့လ်ွင် ငါတို့သည် မေဆိယ (အဓိပ်ပါယ်ကား ခရစ်တော်ဟု ဆိုလိုသည်)ကို တြေ့ချဲ့ကေလျပီဟု ဆို၏။
John 1:42 သူသည် စီမြန်အား ယေဇူးထံတော်သို့ ခေါ်ဆောင်လာသောအခါ ကိုယ်တော်သည် သူ့ကျိုကည့်တော်မူ၍ သင်သည် ယောန၏သား စီမြန်ျဖစ်၏။ သင်သည် စေဖဟူ၍ခေါ်ျခင်းခံရလိမ့်မည် (အဓိပ်ပာယ်မွာ ပေတရုဟု ဆိုလိုသည်)ဟု မိန့်တော်မူ၏။
John 1:43 နောက်တစ်နေ့တြင် ယေဇူးသည် ဂါလေလးယနယ်သို့သြားရန်ဆုံျးဖတ်တော်မူ၏။ ထို့နောက် ကိုယ်တော်သည် ဖိလိပုကိုတြေ့လ်ွင် ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့ဟု သူ့အားမိန့်တော်မူ၏။
John 1:44 ဖိလိပုသည်ကား အန်ျဒေးယနွင့် ပေတရုတို့၏ျမိျု့ဖစ်သော ဘက်ဇိုင်းဒျါမို့မျွဖစ်၏။
John 1:45 ဖိလိပုသည် နာသာနာအဲလ်ကိုတြေ့လ်ွင် ပညတ်တရားက်မ်းနွင့် ပေရာဖက်က်မ်းတို့တြင် မိုးဇက်ရည်ညြွန်းရေးသားခဲ့သောသျူဖစ်သည့် ဂ်ိုးဇက်၏သား၊ နာဇရက်ျမို့သား ယေဇူးကိုငါတို့တြေ့ချဲ့ကျပီဟုဆို၏။
John 1:46 နာသာနာအဲလ်ကလည်း နာဇရက်ျမို့မွ ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုပေါ်ထြက်လာနိုင်သေလာဟု သူ့အား မေးလ်ွင် ဖိလိပုက လာ၍ျကည့်လော့ဟု ဆိုလေ၏။
John 1:47 ယေဇူးသည် မိမိထံသို့နာသာနာအဲလ်လာနေသည်ကျိုမင်လ်ွင် ကောက်က်စ်စဉ်းလျဲခင်းနွင့် ကင်းသောအစ်စရာအဲလ်အမ်ိုးသားစင်စစ်ကျိုကည့်ျကေလာ့ဟု သူ့အား ရည်ညြွန်း၍ မိန့်တော်မူ၏။
John 1:48 နာသာနာအဲလ်ကလည်း ကိုယ်တော်သည် အက်နြ်ုပ်ကိုမည်ကဲ့သို့ သိတော်မူပါသနည်းဟု မေးလ်ွောက်လ်ွင် ယေဇူးက သင့်အားဖိလိပုမေခ်ါမီသင်သည် တည်ပင်အောက်၌ရွိနေစဉ်ကပင် သင့်ကိုငျါမင်သည်ဟု သူ့အာျးပန်ျပောတော်မူ၏။
John 1:49 နာသာအဲလ်က ရာဘီ၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ျဖစ်တော်မူပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် အစ်စရာအဲလ်လူမ်ိုးတို့၏ ဘုရင်လည်ျးဖစ်တော်မူပါသည်ဟု လ်ွောက်လေ၏။
John 1:50 ယေဇူးကလည်းသင့်ကို တည်ပင်အောက်၌ျမင်ရသည်ဟု သင့်အား ငျါပောသျောကောင့် သင်ယျုံကည်သေလာ။ ယခုထက်ပို၍ျကီျးမတ်သောအရာတို့ကို သင်ျမင်ရလိမ့်မည်ဟု သူ့အား မိန့်တော်မူ၏။
John 1:51 ထို့နောက် ကိုယ်တော်က သင်တို့အား ငါအမွန်ဆိုသည်ကား ကောင်းကင်ပြင့်နေသည်ကို လည်းကောင်း၊ လူသား၏အေပါ်၌ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်တော်မ်ားဆင်းလ်က်တက်လ်က်ရွိနျေကသည်ကိုလည်းကောင်း သင်တိျု့မင်ျကရလိမ့်မည်ဟု သူ့အားမိန့်တော်မူ၏။